Phendula: Ngokuzenzekelayo ukuThengiswa kwakho nokuzibandakanya nokuNxibelelanisa nge-imeyile kunye nokufikelela | Martech Zone
Akukho mntu unokukuphikisa oko LinkedIn lelona qonga lokunxibelelana nabantu lisekwe kumashishini liphela kwiplanethi. Ngapha koko, khange ndijonge ukuphinda ndiqhotyoshelwe umgqatswa okanye ndihlaziye eyam i-resume kwiminyaka elishumi ukusukela oko ndasebenzisa i-LinkedIn. I-LinkedIn ayindivumeli kuphela ukuba ndibone yonke into eyenziwayo, kodwa ndinokuphanda nenethiwekhi yomgqatswa kwaye ndibone ukuba basebenze nabani kwaye basebenzelani- emva koko nxibelelana nabo bantu ukuze ufumane okungakumbi.
Ewe, ayisiyonto nje eyenzelwe abavavanyi bemisebenzi okanye iikontraki… ikwangowona uvimba weenkcukacha ubanzi kwiplanethi yamaqabane ezemigodi kunye namathemba ngokunjalo, ngakumbi ukuba uhambisa Intengiso esekwe kwiAkhawunti Isicwangciso.
impendulo ijelo elinamajelo amaninzi iqonga lokuzibandakanya kwentengiso ezenzekelayo ukufikelela kwi-imeyile yobuqu, iminxeba kunye nemisebenzi, ngelixa ukuThengisa kungagxila kwizinto ezibaluleke kakhulu-ukuvala isivumelwano. Nantsi imbonakalo entle yevidiyo:
Phendula Iimpawu zibandakanya
impendulo yenza ukuba ufumane amathemba asemgangathweni kumaphulo akho okufikelela kwi-LinkedIn avela kwi-Salesforce, Hubspot, ICopper CRM, kunye nabanikezeli beenkcukacha ngokudityaniswa kwendalo kunye neenkonzo zomntu wesithathu.
Unxibelelaniso noLwandiso lweChannel -Fumanisa ii-imeyile zeshishini kwi-LinkedIn kwaye unyuse imveliso yakho ngokuphendula u-Chrome. Imisebenzi yakho yemihla ngemihla kunye nokukwazi ukunxibelelana nge-LinkedIn, ii-imeyile kunye nelizwi zihlala zifikelela.
UkuThengiswa kweMultichannel yokuThengisa Bandakanya amathemba akho ngeendlela ezininzi-thumela ii-imeyile zakho kunye nokulandela, wenze iifowuni, ufeze imisebenzi yemihla ngemihla, uqhagamshele kwaye ufikelele kumathemba akho ngokuzenzekelayo kwi-LinkedIn.
Imveliso yokuThengisa -Ramp imveliso yakho kunye nemisebenzi yemihla ngemihla kunye nokukwazi ukunxibelelana nge-LinkedIn, i-imeyile, ilizwi kunye nentlalo. Umsebenzi weLog, kwaye uqhagamshele ngokwendalo kwiCRM yakho, Zapier, okanye ngokudityaniswa kwe-API.
Ulawulo loQhagamshelwano loThengiso -Ukulawula abathengi abanokubakho ngokulula-hlula amathemba akho ngokwemiqathango yeendlela ezininzi zokugcina ukufikelela kwakho kulungelelaniswe. Ukungenisa ngaphakathi okanye ukongeza abafowunelwa, icandelo labafowunelwa, ukucoca abafowunelwa, ukuphononongwa ngokulandelelana kwembali kunye nomsebenzi, kunye nokufakwa kuluhlu lwabamnyama kwimimandla nakwabafowunelwa.
Iifowuni zokuThengisa iiLifu -Nxibelelana nethemba lakho kwifowuni ekunene kwiakhawunti yakho yokuphendula kunye nolwandiso lweChannel. Sebenzisa ilizwi kunxibelelwano lwakho lokuthengisa kunye neefowuni zeLifu.
Iimpawu zokuthengisa eziSmart -Phendula izinto ezixhaswe yi-AI eziPhenduliweyo ukuze uzibandakanye namathemba akho ngcono nangoko- kubandakanya uluhlu lwemeyile ebhokisini, itsheki esemgangathweni, kunye neengcebiso, amanyathelo acetyiswayo kunye neefowuni eziphakanyisiweyo zamathemba ashushu.
Ushicilelo lweQela lokuThengisa Sebenzisana kumaphulo kunye nethemba, lawula amalungu eqela, wabelane nge-imeyile kunye neempendulo zeeprojekthi, ukulandelela ukusebenza kweqela kunye nokunye kunye nePhendula Iqela loHlelo.
Iingxelo zentengiso kunye noHlahlelo -Landa umkhondo wenkqubela phambili yokulandelelana kwakho kwaye uhlalutye iziphumo zeqela lakho ngokuphendula okunika ingxelo ngokulandelelana, iziphumo zeqela, ukurekhoda umnxeba, kunye nokufowuna ukumamela kunye nokukwazi ukuthumela ngaphandle.
Phendula Izixhobo zoPhuculo Tune umyalezo wakho ukufikelela kwintsebenzo ephezulu-Impendulo ineseti yezixhobo zokuphucula ukukunceda ufumane iziphumo ezingcono, kubandakanya umgangatho we-imeyile, uvavanyo lwe-A / B, itemplate yolandelelwano, kunye neeshedyuli zokuthumela ibhokisi.
Fumana iDemo yokuPhendula
Ukubhengezwa: Sisebenzisa a impendulo ikhonkco lokudibana kweli nqaku.
tags: biza ukufikelela kuluntuukucacisauqhakamshelwanoi-crm yobhedudatanyzeukukhangela i-imeyileUkuqinisekiswa kwe-imeyileQhagamshelana ngokupheleleyohubspotLinkedInUkufikelela kunxibelelwanomadkuduukuthengisa okungaphandleIntengiso ephumayoowlermpenduloUlawulo lokunxibelelana nokuthengisaukuzibandakanya kwintengisoiqonga lokuzibandakanya kwentengisoukufikelela kwintengisoingxelo yokuthengisaukuthengisazapierzoominfo